Halatra jiro:VERY ROA MILIARA ARIARY NY JIRAMA -
AccueilVaovao SamihafaHalatra jiro:VERY ROA MILIARA ARIARY NY JIRAMA
28/12/2016 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Tsy nanara-dalàna avokoa ireo tokantrano miisa 1804 tamin’ireo 4470 eto an-drenivohitra mampiasa ny jiro sy rano vokarin’ny orinasa Jirama rehefa nanaovana ny fisavana tampoka ny herinandro mialohan’ny fety teo. Tsy fanarahan-dalàna izay miseho amin’ny endrika maro toa ny fisintonana jiro tsy nahazoana alalana, ny fikitihana ny kaontera ahafahana manena ny tarehimarika sy ny sisa. Tompon’antoka amin’izany ny mpiasan’ny JIRAMA izay manara-po amin’ny fanjifana nefa dia mbola mizara ho an’ny hafa. Trangana tsy fahatomombanana maro mety hiteraka fatiantoka eo amin’ny orinasa ihany koa no sarona nandritra ny fidinana. Araka ny fanazavana dia nahatratra hatramin’ny roa lavitrisa ariary ny fatiantoka naterak’izany teo amin’ny orinasa JIRAMA. Vokany dia ny mpanjifa amin’ny ankapobeny no voatery niharan’ny fisondrotana eo amin’ny vidin-jiro, izay nahatratra in-droa miantoana nandritra ity taona 2016 ity, dia ny volana jona sy ny volana aogositra lasa teo. Na dia efa nisy aza anefa izany fisondrotana izany dia mbola misedra fatiantoka hatrany ny JIRAMA amin’ny famokarana izay ataony. Amidy amin’ny vidiny 427 ariary ny 1kw amin’ny jiro raha mahatratra hatramin’ny 947 ariary ny saran’ny famokarana azy. Toraka izay ihany koa ny rano izay amidy amin’ny vidiny 996 ariary isaka ny 1m3 amin’ny mpanjifa, raha vokarina amin’ny sarany 1217 Ariary izany.
Ny taona 2015 no natsangana ny komity natao hanara-maso ny fanjifana jiro sy rano izay ahitana solontena avy ao amin’ny orinasa JIRAMA, ny minisiteran’ny Angovo ary ny avy ao amin’ny Bianco. Ny fanapahana ny jiro aloha no fepetra noraisina voalohany indrindra nandritra ny fahatrarana ireo olona nanao hosoka ireo fa fantatra kosa ankehitriny fa efa eo am-pandrafetana volavolan-dalàna hamadihana ny fangalarana jiro sy rano ho heloka be vava ny tompon’andraikitra mba hanafoanana izany.
Tsy mitsahatra ny mikaroka vahaolana hatrany ny orinasa miaraka amin’ny fanohanan’ny fitondram-panjakana manoloana ireo olana lalovany raha ny nambaran’ny tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’ity orinasa ity, Randrianarison Feno, amin’ny hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa na dia tsy mahaleon’ny saran’ny fanorenana aza ny vola alaina amin’ny mpanjifa. Fotodrafitr’asa roa lehibe no hatsangana ka ny voalohany dia ny fametrahana toerana famokaran-drano lehibe any Ankadivoribe izay hifampizara famatsiana rano amin’ny Mandroseza, izany hoe tsy hiainga avy ao Mandroseza intsony ny famatsiana rano ireo faritra Atsimon’ny renivohitra toa ny eny Iavoloha, Bongatsara sy ny hafa fa ao Ankadivoribe mba hanamaivanana ny fandaniana.
Efa an-dalana ihany koa ny fametrahana milina vaovao ao Mandroseza hanampiana ny hadirin’ny rano vokarina ao an-toerana. Tombanana ho vita ao anatin’ny enim-bolana voalohany ny taona 2017 izao avokoa ireo asa roa ireo. Efa mihodina kosa amin’izao ny eny Faralaza izay miantoka ny faritra Andrefan’ny renivohitra sy ny eny Sabotsy Namehana ho an’ny faritra Avatra. Goavana ny akon’ireo fotodrafitr’asa rehetra ireo amin’ny famatsiana rano an’Antananarivo raha ny fanazavana satria dia hanafoana tanteraka ny olan’ny famatsiana rano izany.
Rahampitso no voantso eny amin’ny zandarmaria etsy Betongolo i Mahery Lanto Manandafy ,taorian’ ny fitoriana izay napetrak’i Lalatiana Rakotondrazafy sy Andriatongarivo Andry. Raha ny fantatra dia noho ny fanalam-baraka azy ireo tamin’ ny tambazotran-tserasera sy ...Tohiny